लामखुट्टेले किन अरुलाई भन्दा बढी तपाईंलाई टोक्छ ? यस्तो छ कारण !! | सुदुरपश्चिम खबर
लामखुट्टेले किन अरुलाई भन्दा बढी तपाईंलाई टोक्छ ? यस्तो छ कारण !!
सामान्य महिलाको तुलनामा गर्भवती महिलालाई लामखुट्टेले बढि टोक्दछ। धेरैलाई थाहा नहोला तर हामीलाई टोक्ने लामखुट्टे पोथी मात्र हुन्छ। भाले लामखुट्टे शाकाहारी हुन्छन् र बोट बिरुवाको रस चुसेर बाच्छन् । पोथी लामखुट्टेलाई लार्भा उत्पादन गर्न मानव रगत पोषणको रुपमा प्रयोग हुन्छ । नयाँ पुस्ता बाट सभार